ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က လူကို ဘယ်နည်းနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီး သေစေနိုင်လောက်တာလဲ..? by popolay.com
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က လူကို ဘယ်နည်းနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီး သေစေနိုင်လောက်တာလဲ..?
05 Feb 2020 1,304 Views
တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့ သားငါးဈေးကြီးတစ်ခုကနေ စတင်ပျံ့ပွားခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်(ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်)ဟာ အခုဆိုရင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအတော်များများကို ကူးစက်ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိနေပါပြီ။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်းမှာပင် ကူးစက်မှု၊ သေဆုံးမှုတွေ နေ့စဉ် မြင့်တက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရိနာဗိုင်းရပ်စ်က လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ပြီး ဘာကြောင့် သေစေနိုင်လောက်တဲ့အထိ အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ပင်မအဓိက လက္ခဏာရပ်များမှာ (၁) ပင်းပမ်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံစားရခြင်း (၂) အသက်ရှုရ ခက်ခဲလာခြင်း (၃) ကိုယ်ပူရှိန်မြင့်မားခြင်း (၄) ချောင်းဆိုးခြင်း တို့ ဖြစ်သည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်သလဲ..?
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဆိုတာ တိရိစ္ဆာန်တွေဆီမှာ သမားရိုးကျရှိနေကျ ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလွန်ရှားပါးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ သန္ဓေပြောင်းလဲပြီး လူသားတွေဆီကို ကူးလူးရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။
အစောပိုင်းမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့အခြေအနေက အနိမ့်စားဖြစ်ပေမယ့် သန္ဓေပြောင်းလဲမှုတွေ များလာတာနဲ့အမျှ ရောဂါတွေဟာ လူတွေဆီကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကူးစက်သွားပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ လူရဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းထဲမှာ နေထိုင်ပြီး ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းက ထွက်လာတဲ့ အရည်၊ အစက်တွေကနေတစ်ဆင့် ပြန့်ပွားပါတော့တယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိနေတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို ထိတွေကိုင်တွယ်မိတာကြောင့်လည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ကူးစက်ခံထားရသူရဲ့ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်း၊ နှာရည် နဲ့ မျက်လုံးတွေကို ထိမိရာကနေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ဘာကြောင့်လူကို သေစေနိုင်တာလဲ?
လက်ရှိအချိန်ထိတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကုသဖို့ တိကျတဲ့ ဆေးဝါး မရှိသေးပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီး ကူးစက်နေတာကြောင့် အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ အလားအလာရှိနေပါတယ်။
အချို့သော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် ဆေးပေါ်လာဖို့ နောက်ထပ် တစ်နှစ်လောက် ကြာလိမ့်ဦးမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကူးစက်ခံထားရတဲ့ အချို့အမှုတွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ဖြစ်ပြီး အသက်ရှုရ ခက်ခဲခြင်း၊ အဆုတ်ရောင်လာပြီးနောက် အချို့မှာ သေဆုံးတဲ့ထိ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ပဋိဇီဝဆေးတွေက အဆုတ်ရောင်ရောဂါကို ကုသနိုင်ခြင်းမရှိသလို လတ်တလောမှာလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို သေစေနိုင်တဲ့ ဆေးမရှိသေးပါဘူး။
James Cook University က ကူးစက်ရောဂါနဲ့ ခန္ဓာဗေဒပညာရှင် ပရော်ဖက်ဆာ John McBride က သြစတြေးလျ သတင်းအေဂျင်စီတစ်ခုနဲ့ ဖြေကြားခဲ့ရာမှာ “ဒါဟာ သာမန် အအေးမိဖျားနာတာလောက်ထက် ပိုပြီးအခြေအနေမဆိုးဖူးဆိုရင်တော့ ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ကူးစက်ခံရတဲ့ လူနာတွေရဲ့ ၂၅% က အပြင်းအထန်နာဖျားပြီး ဆေးရုံတက်နေကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ တုတ်ကွေးထက် ပြင်းထန်ပြီး အအေးမိဖျားနာတာထက် အဆမတန်ပြင်းထန်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အရေးဖြစ်လာပါတယ်” လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ တုတ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ရောဂါလက္ခဏာခြင်း ဆင်တူပါတယ် ဒါပေမယ့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က ဒီလိုလက္ခဏာရပ်တွေပြဖို့ အချိန်ကြာကြာပိုယူပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ချက်ခြင်းမသိနိုင်တဲ့အတွက် ဗိုင်းရပ်စ် အခြားသူတွေဆီကို ပြန့်ပွားဖို့ လွယ်ကူတဲ့ အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ သန္ဓေပြောင်းလာပါက ခပ်ဝေးဝေးကို မြန်မြန်သွားနိုင်တဲ့အတွက် လူတွေကို ပိုပြီးကူးစက်နိုင်စေပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ သန္ဓေပြောင်းလိမ့်မလားဆိုတာကိုတော့ ပြောဖို့စောနေသေးတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောထားပေမယ့် လက်ရှိ ဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်နှံ့မှု အခြေအနေတွေအရဆိုရင် ခပ်းနှေးနှေးပုံစံနဲ့ သန္ဓေပြောင်းနေတယ်လို့ ယူဆနိုင်ကြောင်း သိရသည်။